Sida saliida loo soo saaro: astaamaha, sababaha iyo cawaaqibta | Cusbooneysiinta Cagaaran
Sidee loo soo saaraa saliida
Jarmal Portillo | 11/05/2021 09:49 | Tamarta Caadiga ah
Saliiddu waa kheyraadka dabiiciga ah ee dhaqaajiyay dunida tan iyo markii la ogaaday. Waxay qabanaysay tan iyo 1800, bartamihii kacaankii warshadaha. Ilaa iyo inta ay jiraan teknoolojiyad u baahan jiritaankeeda, way sii socon doontaa in la isticmaalo muddo dheer. Waxaa jira teknoolojiyada kale sida tamarta la cusboonaysiin karo, laakiin weli lama tartami karaan saliidda. Waxaa jira dad badan oo aan aqoon sida saliida loo soo saaro maxaase ka dhalan kara. Waa mid ka mid ah shidaalka ugu sunta badan taariikhda. Looma isticmaalo oo keliya gubashada mishiinka waa gaariga gaadiidka, laakiin soosaarida agabyo kala duwan. Waxaa loo maleynayaa in adduunku maalin walba cuno 88 milyan oo foosto oo shidaal ah, taasoo u dhiganta tiro dhan 14 bilyan oo litir.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa sida saliida loo soo saaro, maxay yihiin astaamahiisa iyo natiijooyinka ka dhalan kara tan.
1 Sidee loo soo saaraa saliida
2 Astaamaha aagga laga soo saaro
3 Sida saliidda loo soo saaro: meelaha ugu badan ee xoogga la saarayo
4 Cawaaqibta soo saarista saliida
Saliidu waa dareere guban kara oo ah hydrocarbons iyo iskudhisyo kale oo dabiici ah, kuwaas oo kaliya ku jira qaab dhismeedka juquraafiyeed dhawr milyan oo sano oo ka hooseeya dusha sare. Waa natiijada fosil ka mid ah walxaha dabiiciga sida zooplankton iyo algae., kuwaas oo lagu xareeyay salka badaha ama harooyinka malaayiin sano ka hor lana keydiyey sidii fosil. Kuleylka iyo cadaadiska awgood, waxay soo mareen habab jireed iyo kiimiko malaayiin sano. Meelaha qaarkood ee dhagaxu leeyahay wax buuxan, kor ayuu u kacaa, laakiin badiyaa wuxuu ku xanniban yahay dhulka hoostiisa saliidda.
Saliida waxaa la isticmaali jiray ilaa waqtiyadii hore, laakiin muxaadarooyinkii ugu horreeyay waxay ahayd in la sameeyo kerosene. Waxaa sameeyay nin u dhashay Scotland oo la yiraahdo James Young sanadkii 1840. Ugu badnaan waxaa la bilaabay in loo isticmaalo shidaal gubasho. Laga soo bilaabo tan, jahawareerka warshadaha ayaa bilaabay inuu soo muuqdo. Waa Edwin Drake oo ceelkii ugu horreeyay ceel shidaal ka qoday Pennsylvania sanadkii 1859.
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu ogaan karo goobaha saliidda, inta badan barashada cilmiga dhulka. Juquraafiyayaashu waa khubaro daraasad ku sameeya qaab dhismeedka gudaha ee dhulka waxayna xukumi karaan in goob cayiman ay ku habboon tahay sameynta saliidda iyagoo eegaya dusha sare ee dhulka. Sidaa darteed, ogaanshaha nooca dhagax sameynta ee suuragalka ah in saliid la raadiyo, baaritaanno kala duwan ayaa la sameeyaa, kuwaas oo ay ka mid noqon karaan qaraxyo dhulka hoostiisa ah, ka dibna la darsayo mowjadaha dhul gariirka ee ka dhasha qaraxyada, taas oo noo oggolaan doonta inaan ogaanno waxa ay dhab ahaan tahay .
Sidan oo kale, ceel saliid ayaa la sameeyay. Ceelka waxaa lagu sameeyaa iyadoo la qodayo god dheer oo ku saabsan qaab dhismeedka dhulka ee saliidda. Ceelka uu qoday mashiin gaar ah, waxaa la dhigay tuubbo bir ah oo siisa sharaf dhismeedka ceelka. Dusha sare ee mashiinada waxaa la dhigaa taxane taxane ah, kuwaas oo badanaa loogu yeero geedaha kirismaska ​​waxayna mas'uul ka yihiin habeynta cadaadiska iyo xakameynta qulqulka saliida.
Astaamaha aagga laga soo saaro
Waxaa jira cadaadis ku filan aagga soo saarista. Marka godadka la qodo, saliidu kaligeed ayey kici doontaa. Si kastaba ha noqotee, illaa inta cadaadis jiro tani way sii socotaa inay dhacdo oo, maadaama keydku uu madhan yahay, cadaadisku wuxuu bilaabmayaa inuu yaraado. Sidaa darteed, wejiga labaad ayaa bilaabmaya, kaas waxay ku qasbeysaa saliida inay banaanka soo dhigto waxayna ku duraysaa cadaadis dheeri ah keydka. Tan waxaa lagu dhammeeyaa iyadoo lagu durayo biyo, hawo, kaarboon laba ogsaydh, ka dibna gaaska dabiiciga ah.
Marka cadaadisku wali ku filnayn, ama aad rabto inaad saliida si dhakhso leh u hesho sababo jira awgood, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad diiriso saliida si aad hoos ugu dhigto u nuglaanshaha ugana dhigto mid si dhakhso leh oo fudud u kici karta Tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu durayo uumiga haanta. Badanaa, si aan soo-saarista lafteeda uga dhigin mid qaali ah, waxaa fuliya iyada wada noolaanshaha. Tan waxaa ka mid ah adeegsiga marawaxadaha korantada si looga dhaliyo koronto gaaska laga soo saaro ceelka.
Gaas waxaa loo isticmaalaa in lagu shaqeyo unugyada ka soo saara saliida iyo mararka qaarkood xitaa bambooyin loo isticmaalo in lagu dardar galiyo wax soo saarka saliida. Isla mar ahaantaana, badeecad ahaan, kuleyl ayaa soo baxa, kaas oo markaa loo beddelo uumi oo loo qaado keydka si loo siiyo cadaadis iyo kuleyl.
Sida saliidda loo soo saaro: meelaha ugu badan ee xoogga la saarayo
In kasta oo ay jiraan keyd shidaal oo meelo badan oo adduunka ah ka jira, haddana waa iska cadahay inaad u baahan tahay inaad raadiso meelaha ay xooggaagu aad uga sareeyo. Wadamada ugu badan ee soo saara saliida aduunka waa Sacuudiga, Ruushka iyo Mareykanka. 80% saliida maanta la cuno waxay ka timaadaa Bariga Dhexe, gaar ahaan Sacuudiga, Midowga Imaaraadka, Ciraaq, Qatar iyo Kuwait.
Khubaradu waxay u maleynayaan in keydka shidaalka adduunka uu mar hore dhaafay heerkii ugu sarreeyay sannadka 2010. Laga bilaabo waqtigaas wixii ka dambeeya, waxay ku jiraan geedi socod luminta celcelis ahaan 7% sanadkiiba. Tan macnaheedu waxa weeye in kaydadka hadda la yaqaan ay socon doonaan oo keliya tobannaan sano haddii isticmaalkoodu ahaado mid deggan. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka dheeraadka ah ayaa sii kordhaya sanadba sanadka ka dambeeya, in kasta oo dadaal loogu jiro in la soo saaro ilo kale oo tamar kale ah.
Cawaaqibta soo saarista saliida
Sidaad filan karto, waxaa jira cawaaqib xumo xagga deegaanka ah oo ka imaaneysa ka faa'iideysiga saliidda. Sida saliida loo soo saaray sidoo kale saameyn ayey ku yeelataa. Mid ka mid ah cawaaqibka ugu weyn ee soo saarista saliidu waa kuleylka adduunka ee meerahu tabanayo. Waana isbeddelada baaxadda weyn ee cimilada oo ka dhacaya dhammaan gobollada adduunka. Asalka kororkaan heer kulka wuxuu ka yimaadaa sii deynta gaasaska lagu koriyo, gaar ahaan kaarboon laba ogsaydhka.
Inta badan kaarboon laba ogsaydhka ayaa lagu duraa jawiga sababtoo ah isticmaalka shidaalka laga soo saaray batroolka ee lagu gubo gawaarida gaadiidka. Intaa waxaa dheer, waxaa loo isticmaalaa jiilka korantada ee dhirta korantada kuleylka. Qaabka saliida looga soo saaro ayaa ah mid wasakh badan, maadaama saliida aan si fudud loo nadiifin karin. Waa inaan fahamno inay tahay mid aan lagu milmin karin biyaha, sidaas darteed waxay baabi'in kartaa dhammaan xayawaanka iyo dhirta gobol.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan kaga baran karto sida loo soo saaro saliida iyo astaamaha ay leeyihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta Caadiga ah » Sidee loo soo saaraa saliida
Xayawaanada khatarta ku jira